MockupsJar: Stock Mockups yeMafoni uye Desktop | Martech Zone
MockupsJar: Stock Mockups yeMafoni uye Desktop
China, April 9, 2015 Douglas Karr
Iko zvirokwazvo kune musika wechinhu chero - kunyanya mune yekushambadzira tekinoroji pasirese. Ndiri mutendi akasimba mukuchengetedza nguva uye ndisingaite chero chinhu chinoshanda zvakanyanya kaviri. MockupsJar ndeimwe yeaya masevhisi.
Panzvimbo pekuhaya mutori wemifananidzo uye kuvaita kuti vatore mafoto ekushandisa kwako kana saiti pane smartphone, desktop kana mubrowser - wadii wobva watora pikicha yakagadzirwa zvakanaka nekuvhenekera kukuru uye wedzera yako skrini kune iyo for a great mockup ?!
MockupJars iri nyore kwazvo:
Sarudza imwe yadzo curc mockups. Tine akasiyana akasiyana mockups kubva kwaunogona kusarudza imwe.
Isa chidzitiro chako chekushandisa kana kutora webhusaiti webhusaiti nekungopinda iyo url uye mufananidzo unozoshandurwa kune yako yakasarudzwa mockup.
Dhawunirodha yako mockup mune dzakawanda resolution.
Bookmark MockupsJar uye vape iyo yekuyedza drive kuti uone yavo monster mupepeti. Vakatoita basa rakaomarara kuti mugadziri wako atarise pane rakakosha basa!
Tags: Android mockupapple mockupbrowser mockupiphone mockupmobile mockupcverasamsung mockup